၁၉:၁၂၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၄ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:တယ်လီနော် အဖွဲ့.png ကို တင်ခဲ့သည်
၁၀:၂၀၊ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Nobel Prize.png ကို တင်ခဲ့သည်
၁၁:၅၉၊ ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Various - Red Hot + Dance.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၁:၃၉၊ ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Radiantbaby.png ကို တင်ခဲ့သည်
၁၅:၄၂၊ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Kyi diploma.jpg ကို တင်ခဲ့သည် (Copyright © The Nobel Foundation 2012 Artist and calligrapher: Karl Erik Harr Photo reproduction: Thomas Widerberg MLA style: "Aung San Suu Kyi - Nobel Diploma". Nobelprize.org.13 Oct 2012 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/k...)
၁၄:၃၁၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:ဝင်းမော်ဦး၂.jpeg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၄:၂၉၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:WinMawOo1.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၄:၂၅၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:WinMawOo.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၄:၁၇၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:6874635-20thPhoneMawE0009.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၁:၁၉၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Männer wie wir film.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၀:၀၂၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Brokeback mountain.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၂၃:၅၀၊ ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Contracorriente.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၂၂:၄၄၊ ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:POSTER - HOT BOY NOI LOAN 19218.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၁:၅၀၊ ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:20120501p2a00m0na002000p size5.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၃:၂၃၊ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Pg-26-suu-kyi-brother-ap.jpeg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၇:၃၀၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ဖိုင်:Hteinkmin2.svg ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး upload တင်ခဲ့သည်
၀၇:၁၃၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Hteinkmin2.svg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၈:၂၂၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Beyond Rangoon1.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၈:၂၀၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ဖိုင်:Beyond Rangoon.jpg ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး upload တင်ခဲ့သည်
၁၈:၁၈၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ဖိုင်:Beyond Rangoon.jpg ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး upload တင်ခဲ့သည်
၁၂:၀၈၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ဖိုင်:Photoneeded.png ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး upload တင်ခဲ့သည် (~~~~)
၁၂:၀၃၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Photoneeded.png ကို တင်ခဲ့သည် (~~~~)
၀၇:၃၆၊ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:E18969.jpg ကို တင်ခဲ့သည် (© International Labour Organization)
၁၉:၃၁၊ ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Signature 01.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၂:၀၄၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Daw Aung San Suu Kyi's firt ever public speech 1988 - YouTube.ogg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၄:၄၂၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၂ ဖိုင်:Another-country-big2.jpg ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး upload တင်ခဲ့သည်
၀၄:၄၁၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Another-country-big2.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၉:၀၀၊ ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Rohingya.jpg ကို တင်ခဲ့သည် (Rohingya 'boat people' apprehended by Thai forces. Photo from HWR report, provided by Royal Thai Navy)
၀၈:၄၄၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Finedulogo.png ကို တင်ခဲ့သည်
၁၀:၁၂၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Image 118903.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၀:၀၈၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Image 118892.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၁၅:၀၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Euphoria-by-loreen.JPG ကို တင်ခဲ့သည်
၁၅:၀၁၊ ၂၇ မေ ၂၀၁၂ ဖိုင်:250px-Eurovision Song Contest 2012.svg.png ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး upload တင်ခဲ့သည်
၁၅:၀၀၊ ၂၇ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:250px-Eurovision Song Contest 2012.svg.png ကို တင်ခဲ့သည်
၁၄:၁၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:770px-Eurovision Song Contest logo.svg.png ကို တင်ခဲ့သည်
၁၈:၃၀၊ ၁၉ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:17136-Cover-Story-4-Top.gif ကို တင်ခဲ့သည်
၁၈:၃၀၊ ၁၉ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:18865-Cover-Story-4-2.gif ကို တင်ခဲ့သည်
၀၉:၃၇၊ ၁၉ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Khun-Htun-Oo-200.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၇:၃၇၊ ၁၂ မေ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Rovio Mobile logo.png ကို တင်ခဲ့သည်
၂၁:၀၁၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Lady ver3.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၂၀:၁၀၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၂ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Michael aris.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၉:၃၉၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Liver-biopsy-8801 0.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၆:၃၃၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:Livers.png ကို တင်ခဲ့သည်
၁၅:၄၃၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး သည် ဖိုင်:02122011009.jpg ကို တင်ခဲ့သည်
၀၉:၀၆၊ ၂၇ မတ် ၂၀၁၁ အသုံးပြုသူအကောင့် Hteink.min ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/Hteink.min" မှ ရယူရန်